Wararka - Maxaa Loo Doortaa 80 Cotton 20 Polyester Hoodie
80 Cotton 20 Polyester Hoodiewaa mid aad loo jecel yahay dhowaan, Hoodie sida dhar ahaan waxaa loo sameeyaa cimilada qabow guud ahaan. Hoodie waa inuu ahaadaa mid diiran. 100% suufku kuguma hayn doono diirimaad sababtoo ah qaab -dhismeedka maaliyadaha maaliyadda iyo suufka oo ah walax. Waad saxsan tahay, 50/50 ayaa ah kan ugu jaban waxaad heli karto, hase yeeshee waxaa jira isku -darka “caafimaad qaba” oo si fiican u shaqeeya inta ay shaqeynayaan.
80/20 iyo 85/15 waa isku -darka ugu fiican. 20% polyester -ku wuxuu siin doonaa hoodie shaqo loo baahan yahay oo ah diirimaad, iyo 80% suufka ayaa ka dhigi doona neefsasho. Laakiin waa inaad tixgelisaa in funaanadda dhogorta ay yeelan karto dhammaystiran burush ama terry. Dhogorta la jajabiyey waxay dareemeysaa diirimaad badan sababtoo ah fiilooyinka furan iyo qaro weyn. Dhogorta Terry waxay dareemeysaa khafiifnimo xitaa inay isku miisaan tahay oo uma diirran tahay sida buraashka. Laakiin terry wuxuu si fiican ugu shaqeyn doonaa habeenada xagaaga.
Dhogorta la cadayday waxay noqon kartaa mid hal-buraash ah oo “badan” leh, oo caadiyan saddex laab ah. Markasta oo la cadayo ayay dareentaa fiicnaanteeda inay siiso. Sidoo kale way ka yar diirtaa. Koofiyadaha jaban ee H&M iyo Gildan waxay la yimaadaan dhogor furan oo aan cadaynayn, taasina waa sababta ay uga tagayaan fiilooyinka shaarkaaga.
Ugu dambayntiina waa miisaanka dhogorta. Wax badan ayaa ka fiican. Heerka waa 280gsm. Btw dadka aan garanayn, GSM waxay u taagan tahay Grams Per Meter, markaa waa miisaanka jirka ee shayga. Koofiyadaha qaarkood oo leh 350gsm ayaa culeyskoodu yahay 0.8kg. Koofiyadaha jaban ee 50/50 waxay noqon doonaan qiyaastii 350-450 garaam, maxaa yeelay waxay haystaan ​​50% polyester taas oo aad u khafiif ah maaddo la barbar dhigo suufka.
Ugu dambayn. 100% suufka suufku “uma shaqeeyaan” sida ugu fiican ee isku darka 80/20 iyo 85/15. Markaa looma baahna in lacag dheeraad ah lagu bixiyo meelaha bannaan ee wanaagsan ee loo raadinayo si kaamil ah. Samee baaritaankaaga oo lacag ka qaado tayada, kaliya maahan astaantaada.